ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှ သောင်းကျန်သူ ၇၆ ဦးနဲ့ လက်နက်များ ဖမ်းဆီးရမိထား …. - CeleLove
ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှ သောင်းကျန်သူ ၇၆ ဦးနဲ့ လက်နက်များ ဖမ်းဆီးရမိထား ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ TNLAတအောင်း၊ SSAရှမ်း၊AAရခိုင်၊MNDAAကိုးကန့်၊ KIAကချင်ပူးပေါင်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့တွေကို ကြည်းတပ်ကလည်း ခြေလျင်တပ်၊ခြေမြန်တပ်၊နယ်မြေခံတပ်တွေနဲ့ နောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ….. ။
လေတပ်ကလည်း Mi35တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပါ လိုက်ပစ်နေပါတယ်။ သောင်းကျန်းသူတွေက စစ်ယူနီဖောင်းမဝတ်ပါဘူး ….. ။ အရပ်သားလိုဝတ်ထားပြီး သာမန်ပြည်သူတွေကြားထဲဝင်ရော ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ကြတယ် …. ။ညအမှောင်ကို အားကိုးပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့် ထင်သလောက်အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး …. ။
ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေမှာ ညကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ ညမြင်ကွင်းရန်သူရှာစနစ်တွေပါဝင်ပါတယ် ….. ။ လောလောဆယ် သောင်းကျန်းသူ၇၆လောင်းနဲ့ လက်နက်တွေရထားပါပြီ …. ။ပုံတွေမကြာခင်ထပ်တင်ပေးပါ့မယ် …. ။ မငြင်းပါဘူး….. တိုက်ပွဲတို့သဘာဝ နှစ်ဖက်အကျအဆုံးကတော့ရှိပါတယ် …. ။
ဒါပေမယ့် အပြစ်မဲ့အရပ်သားတွေနဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို သာလွန်အင်အားနဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သွားတဲ့…. သောင်းကျန်းသူတွေကို တရားဥပဒေရဲ့အဆုံးအမအောက်ကိုပိုဖို့ သူတို့ခုချိန်ထိ တစက်မနားပဲ တရုတ်နယ်စပ်မရောက်ခင်လိုက်ပိတ်ဆို့နေပါတယ် ….. ။ အဆိပ်ပင်ရေမလောင်းကြပါနဲ့…….မိမိရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာ မသင်္ကာစရာလူတွေတွေ့ခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာကို အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပေးပါ…. သူတို့လာရှင်းပါလိမ့်မယ် … ။
ရှမျးမွောကျတိုကျပှဲမှ သောငျးကနျြသူ ၇၆ ဦးနဲ့ လကျနကျမြား ဖမျးဆီးရမိထား ….
ရှမျးမွောကျတိုကျပှဲမှ သောငျးကနျြသူ ၇၆ ဦးနဲ့ လကျနကျမြား ဖမျးဆီးရမိထား ဆုတျခှာသှားတဲ့ TNLAတအောငျး၊ SSAရှမျး၊AAရခိုငျ၊MNDAAကိုးကနျ့၊ KIAကခငျြပူးပေါငျး မွောကျပိုငျးမဟာမိတျသောငျးကနျြးသူအဖှဲ့တှကေို ကွညျးတပျကလညျး ခွလေငျြတပျ၊ခွမွေနျတပျ၊နယျမွခေံတပျတှနေဲ့ နောကျကနတေောကျလြှောကျလိုကျနတောပဲဖွဈပါတယျ ….. ။
လတေပျကလညျး Mi35တိုကျခိုကျရေးရဟတျယာဉျတှနေဲ့ပါ လိုကျပဈနပေါတယျ။ သောငျးကနျြးသူတှကေ စဈယူနီဖောငျးမဝတျပါဘူး ….. ။ အရပျသားလိုဝတျထားပွီး သာမနျပွညျသူတှကွေားထဲဝငျရော ကိုယျယောငျဖြောကျကွတယျ …. ။ညအမှောငျကို အားကိုးပုနျးကှယျဖို့ကွိုးစားကွပမေယျ့ ထငျသလောကျအလုပျမဖွဈပါဘူး …. ။
ဒီရဟတျယာဉျတှမှော ညကွညျ့မှနျပွောငျးနဲ့ ညမွငျကှငျးရနျသူရှာစနဈတှပေါဝငျပါတယျ ….. ။ လောလောဆယျ သောငျးကနျြးသူရ၆လောငျးနဲ့ လကျနကျတှရေထားပါပွီ …. ။ပုံတှမေကွာခငျထပျတငျပေးပါ့မယျ …. ။ မငွငျးပါဘူး….. တိုကျပှဲတို့သဘာဝ နှဈဖကျအကအြဆုံးကတော့ရှိပါတယျ …. ။
ဒါပမေယျ့ အပွဈမဲ့အရပျသားတှနေဲ့ တပျမတျောသားတှကေို သာလှနျအငျအားနဲ့ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျသှားတဲ့…. သောငျးကနျြးသူတှကေို တရားဥပဒရေဲ့အဆုံးအမအောကျကိုပိုဖို့ သူတို့ခုခြိနျထိ တစကျမနားပဲ တရုတျနယျစပျမရောကျခငျလိုကျပိတျဆို့နပေါတယျ ….. ။ အဆိပျပငျရမေလောငျးကွပါနဲ့…….မိမိရှာနဲ့အနီးဝနျးကငျြမှာ မသင်ျကာစရာလူတှတှေခေဲ့ရငျ သကျဆိုငျရာကို အမွနျဆုံးအကွောငျးကွားပေးပါ…. သူတို့လာရှငျးပါလိမျ့မယျ … ။
ဝက်ခြံလုံးဝသက်သာပြီး နောက်လည်းထပ်မထွက်စေချင်ရင် ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ